Umothuko we-absorber, i-Cv ngokudibeneyo, i-Auto Outer ye-Cv edibeneyo, i-Clutch Disc-Wind Long
Iqela elide lomoya, elikomkhulu laseNingbo, liphulo elidibeneyo elasekwa ngabavelisi abaninzi kunye nenkampani yorhwebo. Singabantu bobabini kwimveliso kunye nokungenisa kunye nenkonzo yokuthumela kwelinye ilizwe. Iqela lethu linamava angaphezulu kweminyaka eli-10 yokuvelisa umsi we-Shock, i-Ball Joint, i-Rubber Parts, i-Clutch Cover, i-Clutch Disc, i-CVJoint, i-Cylinders, i-Belt, i-Pump Water njalonjalo. Imakethi ibandakanya iYurophu, uMntla Melika, uMzantsi Melika kunye neAfrika, ngentengiso engaphezulu kwe- $ 20,000,000 ngonyaka. Iimpawu ezizezethu zibandakanya i-LWT, i-SP, kunye ne-UM abafumene inqanaba eliphezulu lokwamkelwa kweemarike kuMbindi Mpuma, kwi-Mpuma ye-Asiya, kwi-Asia eseMbindi nase-Afrika.
Iipompo zamanzi eziManzi zeToyota Camry ASV50 OEM C
Auto Izahlulo Shock absorber Kuba Toyota Corolla AE ...
Imoto yaseJapan engaphandle kweCV edibeneyo TO-04 Nge-ABS ye ...
Auto Izahlulo Clutch Cover CT-104 Kuba Land Cruiser ...
Itshintsha nini iklatshi yesandla? Thina sh ...
Ipleyiti yokuhambisa yokuhambisa iklatshi yeyakho kwizinto ezisetyenziswayo. Ngokusetyenziswa kweemoto, ipleyiti yokubamba iya kunxiba kancinci. Xa ukunxiba kufikelela kwinqanaba elithile, kufuneka kutshintshwe. Singazi njani ukuba ...
Ukuthengiswa kwe-flash kuyafumaneka ngoku kungekho M ...
Lo nyaka ubenzima kakhulu kuthi sonke ngenxa yentsholongwane ye-corona virus. Siyathemba ukuba singasebenzisana ukuze siphile kwaye sonwabe. Silungiselele isitokhwe esikhulu e-China nase-Dubai zokugcina kwakho. Ukuba ungathanda l ...
1. 1 iqhekeza MOQ, iiyure ezingama-24 Ukuhanjiswa. 2. Iivenkile ezithengisa ngokuthe ngqo eDubai naseGuangzhou 3. Ubukho besitokhwe esikhulu 4. Gcwalisa imveliso enzulu ngaphezu kweekhowudi ezingama-7000 + ezahlukeneyo 5. Umdibaniso wabenzi be-8 ...